Tababaraha Man City Guardiola Oo Ka Hadlay Soo Laabashada De Bruyne
HomeWararka CiyaarahaTababaraha Man City Guardiola oo ka hadlay soo laabashada De Bruyne
September 13, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska 0
Tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa ka hadlay xaalada Kevin De Bruyne .
Ciyaaryahanka khadka dhexe ayaa kaliya ciyaaray 11 daqiiqo illaa iyo haatan xilli ciyaareedkan, maadaama uu la tacaalayo ka soo kabashada dhibaato canqowga ah.
Guardiola ma hubo in De Bruyne uu ku soo bilaaban doono kulanka RB Leipzig ee wareega group -yada Champions League bartamaha asbuuca.
“Waan arki doonaa, runtii wuxuu sameeyay tababar wanaagsan toddobaadkan” ayuu yiri Guardiola.
“Waxaan heysanaa ciyaartoy qoto dheer, Phil (Foden) waxaa ku jiray (kursiga keydka), Kevin sidoo kale, Raheem (Sterling) iyo John (Stones) sidoo kale. Labadii kulan ee ugu danbeysay ee Norwich iyo Arsenal waxaa ciyaaray xidigo cajiib ah kuwaasi oo aan wali heysano . Waxay u qalmeen inay weli ciyaaraan.
“Qof walba wuxuu sameeyaa kaalintiisa. Ragga ciyaaraya wanaagsani waxay haystaan ​​fursado badan oo ay ku ciyaari karaan.